Akhriso: War-murtiyeedka Shirkii Garsoorka dalka ee la soo gabagabeeyay | Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Akhriso: War-murtiyeedka Shirkii Garsoorka dalka ee la soo gabagabeeyay
Akhriso: War-murtiyeedka Shirkii Garsoorka dalka ee la soo gabagabeeyay
Maxkamadda Sare ee Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya waxay magaalada Muqdisho ku martigalisay shir-sanadeedka 3aad ee Garsoorka Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya.
Shirka waxa ka soo qeybgaley Garsoorka labadiisa heer, Garsoorka Dowladda Federaalka iyo dhammaan dowladaha xubnaha ka ah Dowladda Federaalka. Shirka waxa kale oo ka soo qeybgaley Wasaaradda Caddaaladda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Ururka Qareenada Soomaaliyeed, Xafiisyada: Hanti Dhowraha Guud iyo Garyaqaanka dowladda, Ciidamada Booliiska iyo Asluubta Soomaaliyeed, Ururka Haweenka, Rugta Ganacsiga, Jaamacadaha, Culimada, Ururrada bulshada rayidka ah, iyo qeybo ka mid ah bulshada caalamka.
Shirka waxa maalintiisii labaad ka qeybgaley Wasiirka 1aad (Ra’isal Wasaaraha) Xukuumadda JFS oo hadal-jeedin ku aadan Garsoorka ka jeediyey madasha shirka.
Shirkan oo ah mid qaanuuni ah sida ku cad Qodobka 30aad ee Xeerka Nidaamka Garsoorka 1962, waxa diiradda lagu saaray waxqabadka Garsoorka sanadkii tagay, caqabadaha ka hor yimid ama hortaagan iyo qorshayaasha mustaqbalka.
Shirka waxa lagu aqoonsaday muhiimadda ay leedahay sii wadidda dib-u-habeynta ballaadhan ee ku socota Garsoorka dalka si uu xilkiisa ugu guto si madaxbannaan, una xaqiijin-karo dhowridda sarraynta sharciga, ilaalinta xuquuqda aadamaha iyo bixinta adeegyada caddaaladeed ee Garsoorku u xilsaaran yahay.
Ka qeybgaleyaasha shir-sanadeedka Garsoorka Soomaaliya waxay soo saareen wartiyeedkan:
1. Shirku waxa uu bogaadiyey isbeddelada ballaadhan ee lagu sameeyey Garsoorka dalka sanadihii u dambeeyey, waxaanu soo jeediyey in dedaaladaas la sii kordhiyo.
2. Shirku waxa uu soo jeediyey in ahmiyad gaar ah la siiyo fulinta xukunnadda Garsoorka si kalsoonida bulshadu dawladnimada ku qabto sare loogu qaado.
3. Shirku waxa uu soo jeediyey in la dhiso Booliiska Garsoorka kaas oo fududeyn-doona fulinta xukunnadda iyo sugidda amniga hay’adaha Garsoorka.
4. Shirku waxa uu ku baaqay in si wada jir ah loola dagaallamo musuqmaasuqa, maandooriyaha iyo been-abuurka.
5. Shirku waxa uu ku baaqay in la dhammaystiro hannaanka caddaaladda dalka, dib-u-eegista dastuurka iyo dhismaha Golaha Adeegga Garsoorka.
6. Shirku waxa uu hoosta ka xarriiqay muhiimadda ay leedahay in shuruucda dalka loo dabaqo, fasiro, loona hirgaliyo hannaan midaysan.
2 Shir-sanadeedka Garsoorka Soomaaliya Jan 2021
7. Shirku waxa uu soo dhaweeyey dhismaha Mac-hadka Tababarka Garsoorka dalka.
8. Shir-sanadeedka Garsoorku waxa uu hoosta ka xarriiqay kaalinta Garsoorka ee ilaalinta sarraynta sharciga, ku dhaqanka sharciga iyo dhowridda xuquuqda aadamaha.
9. Shirku wuxuu umahad celinayaa madaxda sare ee laanta fulinta ee uu ugu horee madaxweynaha dalka raeysul wasaaraha iyo wasiirka caddaaladda oo taageeradooda la’aantood eyna hir gasheen is bedeladaas aan soo tilmaannay.
10. Gunaanadkii ka qeybgaleyaasha shir-sanadeedka Garsoorku waxa ay Maxkamadda Sare uga mahadceliyeen qabashada iyo joogteynta shir-sanadeedka Garsoorka oo sanadkii 3aad qabsoomay.
11. Shirku waxaa kale oo uu bogaadiyey una mahadceliyey guddiga qabanqaabada shir-sanadeedka 3aad ee Garsoorka dalka
James Swan oo Baydhaba kula kulmay Laftagareen
Wasiirka Tamarta oo safiirka Turkiga kala hadlay dhameystirka heshiisyo hore
Magacyada Guddi madaxabanaan ee Hay’adda Batroolka Soomaaliya
Roobab Khasaare naf iyo maal ah geystay oo ka da’aya Puntland
Golaha Shacabka oo u yeeray wasiirka Amniga, dhacdo kufsi iyo dil isugu jirta awgeed.
Wasaaradda Amniga: “Cunaqabateyn ayaa saaran Mukhtaar Roobow, mana geli karo Doorashada K/Galbeed..” (War-saxaafadeed)